Shirkadda Golis oo soo bandhigtay qiimo dhimis ciidda Carafo | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo soo bandhigtay qiimo dhimis ciidda Carafo
Qiimo dhimis gaareysa 25%
Shirkadda Golis oo soo bandhigtay qiimo dhimis ciidda darteed
Maareeyaha shirkadda Golis Aadam Sh.Doon ayaa maanta shir uu xafiiskiisa ku qabtey ku sheegay in shirkadda Golis ay ugu talo gashey macaamiisheeda qiimo dhimis ciidda Udxiyada daarteed.
Maareeyuhu wuxuu dhammaan umadda Muslimka ah ugu tahniyadeeyay ciidda barakeysan ee “ Al-udxiya” wuxuuna u rajeeyey inta joogta dhulka barakeysan ee makka in ilaahey xajkooda ka aqbalo.
Wuxuuna ku daray hadalkiisa “ inta aan nasiibka u yeelan in ay fariidada xajkaah gudato ilaahey ha u sahlo,hana waafajiyo kheyrka”.
Maareeyuhu wuxuu tahniyadda ciidda ka dib sheegay, in shirkadda Golis ay macaamiisheeda sharafta leh u diyaarisay abaal marin fiican oo loogu tala galay munasaabadda ciidda.
Wuxuuna yiri “ macaamiishayada isticmaala adeegga telephone-ka Postpaid-ka waxaan u diyaarinay qiimo dhimis gaareeysa 25%,kuwa prepaid-ka isticmaalana 20%,waxaan u rajeynayaa dhammaan macaamiisha shirkadda in qiimo dhamista loo sameeyey ka faa’iideystaan”.
Shir saxaafadeedkaas ayaa waxaa kaloo looga hadlay fariimo dhaliyey is-fahan la’aan dhinaca dowladda Puntland iyo shirkadda Golis.
Maamulka shirkadda ayaa arinkaas si faah faahsan u sharaxay sheegayna in shirkaddu ay raali galin buuxda ka bixineyso fariimahaas sida khaladka ah u gaarey qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda.
Maamulku wuxuu si cad u sheegay in fariimahaas aysan mas’uul ka ahayn lana socon markii la qorsheeyey in la diro, fariimuhuna ay yihiin kuwa dibadda laga soo direy.
Hoggaanka xiriirka dadweynaha oo shir saxaafadeedkaas ka hadlay ayaa sheegay in waxa dhacay ay yihiin khalad ka yimid fariin laga soo direy dibadda.
Wuxuuna yiri “ raali galin buuxda ayaan ka bixinaynaa waxa dhacay,shirkadda Golis waxay u taagantahay wax tarka bulshada marna kama aysan shaqayn dhibaato, iyo qal qal galinta amniga”.
Waxaa su’aalaha saxafiyiintii ka soo qeyb gashey shirka ka jaawabey qaar ka mid ah maareeyaha guud ee shirkadda Aadam Sh.Doon Calin oo sheegay in waxa dhacay aysan mar labaad soo noqon doonin.wuxuuna sheegay in shirkaddu arinkaas ku guda jirto,wax dhibina jirin.